လူအလှည့်ပတ်သင်သည်သူတို့၏အမှန်တကယ်အသက်အရွယ်ထက်အများကြီးအသက်ကြီးဖြစ်ကြောင်းထင်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ကြသည်မဟုတ်လော တကယ်တော့သင်ရုံမှားယွင်းတဲ့, မိတ်ကပ်စည်းကြပ်အဝတ်ကိုရှေးခယျြနှင့်အနည်းငယ်အမှားတွေအောင်, သို့သော်ဤအလွယ်တကူဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်ပါတယ်။
အမြိုးသမီးမြားအစဉ်အမြဲနုပျိုကိုကြည့်ချင်ပေမယ့်, အောင်တက်လျှောက်ထားသည့်အခါကသိရှိခြင်းမရှိဘဲ, အမှားတွေဖြစ်စေလျက်, အဝတ်နှင့်ပုံရိပ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုရွေးချယ်ရာတွင်ဒါကြောင့်သူတို့ကသူ့ကိုမှန်ကန်အသက်အရွယ်ထက်အများကြီးအသက်ကြီးကြည့်ရှုပါ။ ဒါဟာသူတို့ကိုပိုပြီးလုပ်ဘယ်တော့မှဤတင်းတင်းပြောတတ်တဲ့ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
1. အရမ်းမှောင်မိုက်မျက်ခုံး - အဘယ်သူမျှမရှိ
ပီပီမျက်ခုံးမပွုနိုငျစရာမလိုဘဲအပြည့်အဝ image ကိုဖန်တီးရန်, ဒါပေမဲ့သူတို့အရမ်းတောက်ပတက်စေလျှင်, ထူးဆန်းကြည့်ရှုမည်သာပေမယ့်အသက်အရွယ်ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ ညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက် - မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မျက်ခုံး၏အရောင်ပေါ့ပါးသေံသောအရိပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
2. အချိုးအစားမညီမျှမှုကို silhouette - မျှ
၎င်း၏ပုံရိပ်ကိုတက်ဆွဲထဲမှာနောက်ထပ်ပျက်ကွက် - အရာမမှန်ကန်ကြောင်းကွန်နက်ရှင်။ ရလဒ်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားမညီမျှမှုလှပါတယ်။ သငျသညျမွငျ့မားခါးနဲ့လူကြိုက်များသည်လက်ရှိတွင်လျှော့တစ်ခုသို့မဟုတ်စကတ်ကိုဝယ်ယူပါကအနည်းငယ်ဝမ်းထုတ်ဖေါ်ရာ, တစ်အင်္ကျီနှင့်တစ်ဦး sleeveless ထိပ်တန်းသူတို့နှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပုံတစ်ပုံကို Add ဂျာကင်အင်္ကျီကိုတိုစေနိုင်ပါတယ်။ နည်းဥပဒေလည်ပတ်ခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်: ဥပမာ, ထိပ်အသံအတိုးအကျယ်လျှင်, အောက်ခြေတင်းကျပ်စွာဖြစ်ရမည်သော်လည်း။
အောက်ပိုင်းမျက်ခွံပေါ် 3. Eyeliner - မျှ
အထက်နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Prokrashivaya မျက်စိကှနျ့, သင်ကကျဉ်းမြောင်းစေနိုင်ပြီး, တပြင်လုံးကိုမိတ်ကပ်ပျက်စီးလိမ့်မည်။ လုပ်-up, အနုပညာရှင်တွေထဲကနေညာဘက်ကိုအကြံဉာဏ်ကို - တစ်ဦးအလင်းခဲတံနှင့်အတူအောက်မျက်ခွံကိုရှုတ်ချခြင်းငှါ, ကြည့်ပိုပြီးပွင့်လင်းစေ။
4. ထူးအိမ်သင်မျက်ခုံး - အဘယ်သူမျှမရှိ
စမ်းသပ်ချက်မကြာခဏမျက်ခုံးနှင့်အတူကျရှုံးခြင်းအတွက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ မျက်ခုံး "ညှို့" ရှည်လျားသောအတိတ်တွင်ဖြစ်ယခုအခါတစ်ဦးထက်ပိုနုပျိုအသွင်အပြင်ပေးသောသက်ဆိုင်ရာသဘာဝအ Bushi မျက်ခုံးဖြစ်ကြ၏သိရသည်။ လှပသောအသွင်သဏ္ဌာန်အရမှောင်မိုက်အရိပ်နှင့်ခဲတံကိုသုံးပါ။ အဆိုပါလှထဲကနေနောက်ထပ်အစွန်အဖျား: သူတို့အပေါက်ကိုပိတ်ဖို့နှင့်ဆံပင်ကြီးထွားတားဆီးကြောင့်, မျက်ခုံးအနီးမုန့်လျှောက်ထားမထားပါနဲ့။
အနိမ့်ကြိမ်ဒဏ်အပေါ် 5. mascara - မျှ
သငျသညျမကျြစိကိုလှည့်ပတ်သည်သင်၏အရေးအကြောင်းတွေမှအခြားသူတွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်မလိုချင်ကြဘူးလျှင်, လုံးဝအောက်ပိုင်းကြိမ်ဒဏ်, ပိုမှင်အသံအတိုးအကျယ်ကိုကျော်ဆေးထိုးခြင်းကိုရပ်တန့်။ ညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက် - သို့မဟုတ်နဂိုအတိုင်းသူတို့ကိုစွန့်ခွာသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့မျက်စိ၏ထောင့်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူကျော်ဆေးထိုးခြင်း။
6. အလွန်အကျွံသန့်စင် - အဘယ်သူမျှမ
အတော်များများကမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးလေးနက်အမှားလုပ် - မကြာခဏကွာ, သန့်ရှင်းရေး လုပ်. နောက်ဆုံးမှာအသားအရေလည်းခြောက်သွေ့ပါးလွှာဖြစ်လာဆိုတဲ့အချက်ကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောအခြားကုသမှု။ လှအလွန်အကျွံဖြီးအရေးအကြောင်းတွေ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်ကြောင်းအတည်ပြုပါ။ ညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက် - ရန်လိုဖြစ်ရုံကျန်းမာဆီကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်မဟုတ်သင့်ကြောင်းပါဝင်ပစ္စည်းများ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကိုနှင့်အတူသန့်စင်။
7. တစ်ခုလုံးကိုမျက်ခွံပေါ်မှောင်မိုက်အရိပ် - အဘယ်သူမျှမ
အဆင်းလှသောလိင်အကြားတစ်ဦးကဘုံအမှား - အထက်မျက်ခွံလုံးဝမှောင်မိုက်အရိပ်ဆေးထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်အဖြစ်မျက်နှာကိုအမြင်အာရုံဟောင်းများကိုကြည့်ရှုသည်။ ပိုကောင်းတဲ့ဒီအမှားရှောင်ရှားရန်နှင့်မျက်စိပိုပြီးဖော်ပြစေရန်, သာမျက်စိများ၏ပြင်ပထောင့်အပေါ်မှောင်မိုက်အရိပ်သက်ဆိုင်ပါသည်။
8. အဝတ်အစားပုံမဟုတ်ပါဘူး - မျှ
မကြာသေးမီကလူကြိုက်များ၏အထွတ်အထိပ်မှာအသံအတိုးအကျယ် wear ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သင်ကဂရုတစိုက်ရွေးချယ်သင့်ကြောင်းအကောင့်သို့ယူသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦး slinky စားဆင်ယင်နှငျ့အခွားအင်္ကျီကိုပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖက်ရှင်အပေါ်ပေမယ့်ကိန်းဂဏန်းနှင့်အသက်အရွယ်ရဲ့ features တွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့မကောငျးသောသတိရပါ။
9. Make-up, corrector မပါဘဲ - မျှ
များစွာသောမိန်းမအိပ်ပျော်ရာမရှိခြင်းနှင့်အတူ, amplified သောမျက်စိ, အောက်မှာမှောင်မိုက်စက်ဝိုင်းထဲကနေခံရ၏။ ပဲလိမ်းဆေးကိုသာချွတ်ယွင်းအလေးပေးပြောကြားနိုင်ပါတယ်သူတို့ကိုပန်းချီဖို့ကြိုးစားနေ။ တစ်ဦး corrector လျှောက်ထားရန်ဖြစ်တယ်, သူတို့မျက်စိအောက်မှာမှန်ကန်သောဖြေရှင်းနည်းအဘယ်သူ၏အထွတ်ပါးမှတိုးချဲ့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့တြိဂံဆွဲရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါအလွှာပါးလွှာ corrector ဖြစ်သင့်သည်။ ထို့နောက်မျက်နှာကိုသေံဖို့လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
10. မျက်နှာမပျက်လည်းနိမ့်လျှောက်ထား - မျှ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအရ, မျက်နှာကတော့ cheekbones ၏အရှိဆုံးငေါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှလျှောက်ထားရပါမည်။ ဒီအသက်အရွယ်၌နှိမ့်ချရွှေ့ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်မျက်နှာမပျက်နိုငျအလှဆင်အဖြစ်အစေခံမည်မဟုတ်ပေမယ့်အစားအသက်နှင့်ကန့်သတ်မှုကိုအလေးပေးရန်။ အဟောင်းတွေအမျိုးသမီးတွေမိတ်ကပ်အနုပညာရှင်တွေအမြင်အာရုံမျက်နှာကိုဆွဲလတံ့သော cheekbones ရဲ့ထိပ်မှာမျက်နှာလျှောက်ထားရန်အကြံပြုပါသည်။
11. အလွန်တင်းကျပ်သောစတိုင် - မျှ
အသက်အရွယ်နှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့ရိုးရှင်းတဲ့စတိုင်နှင့်ရိုးရာအရောင်များကိုရွေးချယ်ရာတွင်သည်ဖက်ရှင်အမှုအရာစွန့်ခွာရန်အစနေကြသည်။ ဒါဟာအသက်အရွယ်ကထပ်ပြောသည်သောလေးနက်သောအမှားဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းခြားနား, ထိုကဲ့သို့သောမူရင်းအိတ်အဖြစ်ဖက်ရှင်အသံထွက်၏တစ်စုံကိုရွေးချယ်ပါ, အပြည့်အဝလူငယ်အရာအတွက်တက်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့မကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ stylist ထံမှအကြံဉာဏ်များ: အနီရောင်နှင့်အပြာရောင်အများစုအရိပ်အားလုံးနီးပါးအမြိုးသမီးမြားအဘို့အသင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်။
12. ဆက်စပ်ပစ္စည်းတဦးတည်းအရောင် - အဘယ်သူမျှမ
အချိန်ကြာမြင့်စွာကျွန်တော်ဖိနပ်များ၏အရောင်, အိတ်, ခါးပတ်နှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းတူညီတဲ့အရောင်၏ဖြစ်သင့်သောဆုံးမဩဝါဒပေးပါပြီ, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ခေတ်မမီတော့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်နာများ, လူတွေ, တူညီစတိုင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကောက်ကြောင်းဆိုကြသည်သည်သူ၏အသက်အရွယ်ထက်အများကြီးအသက်ကြီးကြည့်ရှုပါ။ အရောင်အုပ်စုတစ်စု၏ကွဲပြားခြားနားသောအရိပ်တစ်ခုပေါင်းစပ်တဦးတည်းတောက်ပအသေးစိတ်ကိုရှေးခယျြခွငျးသို့မဟုတျသုံးစွဲဖို့သာပိုကောင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အခြေခံအုတ်မြစ်အများစုက 13 - မပါ
သင့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအားနည်းချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့တစ်ဦးဆိုရင်တော့ Matte အသားအရေအောင်မြင်ရန်, များစွာသောမိန်းမမျက်နှာကိုမှလျှောက်ထားအခြေခံအုတ်မြစ်များလွန်းထူအလွှာဖြစ်ပါသည်, ဤသာအရေးအကြောင်းတွေပေါ်အလေးပေးဖို့ကထပ်ပြောသည်။ နောက်ထပ်ဘုံအကြောင်းပြချက် - မှားအရောင်မုန့်ကိုလည်းမျက်နှာအဟောင်းတွေကိုကြည့်စေသည်ရာ။ ဒါဟာအသားအရေကိုပိုမိုကျန်းမာနှင့်သဘာစေ shimmering အမှုန်နှင့်အတူတစ်ဦးအလင်းနှင့်အရည်အရည်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ သာ. ကောင်း၏။
14. အမှုန့်တစ်အထူအလွှာ - မျှ
အဆိုပါသေံအခုလဲ၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်မဟုတ်ရင်ကလုပ်ထပျက်ကွက်စေမည်အများကြီးမဖြစ်သင့်သောအမှုန့်လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျအလငျးဓာတ်သတ္တုသို့မဟုတ်ဆန်အမှုန့်ကိုအသုံးပြုဖို့ပါကသာ T-ဇုန်ကနေထွန်းလင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းသတိရ။ အသက်ပေးလို, ဒီအရေးအကြောင်းတွေကပိုသိသာစေမည်ကို၎င်း, အသားအရေလည်းခြောက်သွေ့တဲ့ကြည့်ရှုမည်အဖြစ် Make-up, အနုပညာရှင်များ, အမှုန့်မျက်စိဧရိယာအကြံပြုကြသည်မဟုတ်။
အိပ်စက်ခြင်း၏ 15 မရှိခြင်း - အဘယ်သူမျှမ
စာရင်းများအရများစွာသောမိန်းမအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်အိပ်ပျော်ခြင်းမရှိခြင်းကနေဆငျးရဲခံရ, ဤစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ပေါ်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများ၏အဆင့်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအိပ်မပါဘူးဆိုရင်, ခန္ဓာကိုယ်အများကြီးပိုမြန်အသက်အရွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အိပ်ပျော်၏နက်ရှိုင်းသောအဆင့်ကာလအတွင်းခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးဆဲလ်များ၏ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံလိုအပ်ကြီးထွားဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာအိပ်ပျော်ခြင်း 8 နာရီကြာရှည်သင့်ကြောင်းသတိရပါ။
အရက်သောက်ဘို့ 16. စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ - မျှ
မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်အပျက်သဘောသဏ္ဌာန်ကိုထိခိုက်ခြင်း, အရက်သည်သူလှပနုပျိုကြည့်ရှုချင်သောသူတို့အဘို့နှစ်ခုအဓိကအနုတ်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်လတ်ဆတ်တဲ့အသွင်အပြင်၏အခြေခံဖြစ်သောရေဟာခန္ဓာကိုယ်ဆုံးရှုံး။ ရလဒ်အဖြစ်, မျက်စိအောက်မှာဒဏ်ငွေအရေးအကြောင်းတွေနဲ့အိတ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ပေါ်လာဖို့စတင်။ ဒုတိယအ, အရက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဗီတာမင် A ပမာဏကိုလျော့ကျစေပါတယ်, ထိုသို့ဆဲလ်သက်တမ်းတိုးဘို့အရေးကြီးပါသည်။ သင်တစ်ဦးကော့တေးသို့မဟုတ်အခြားသောက်စရာအနားယူနှင့်ပျော်မွေ့ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်, သငျသညျကိုမသောက်ရေပမာဏကိုတိုးမြှင့်။
60 နှစ်အတွင်းတစ်ဖက်ရှင် icon ကိုဖြစ်လာ? လွယ်ကူသော!
မဟုတ်တစ်ခုတည်း Chanel: နှစ်ဆယ်ရာစုအဘယ်သို့အရသာပိုမိုနှစ်သက်စတိုင် icon တွေကို?
သင့်ရဲ့ဖိနပ်အဆင်ပြေစေမည် 20 ဘဝကိုဟက်ကာ,
ချက်ချင်း Remove: 25 အရှိဆုံးစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောခရစ္စမတ်ဆွယ်တာအင်္ကျီ
ဒါဟာအဘယ်သူ၏အလုပ်အကိုင်များနောက်ဆုံးတော့ပလပ်စတစ်ပျက်စီးပြီ 11 ရက်ကြယ်များ၏ပြိုကျပါ!
အဆိုပါ 70 မှ "ပူ" လူတစ်ပျော်စရာရွေးချယ်ရေး: အဒစ္စကို၏ရစ်သမ်အတွက်
ခေတ်သစ်ယောက်ျားရဲ့ဖက်ရှင်၏ 10 အရှိဆုံးရယ်စရာခေတ်ရေစီးကြောင်း
သာရုရှားနိုင်ငံတွင်တွေ့မြင်နိုင် 35 လှည့်ကွက်: အဘယ်သူသည်အခိုငျအမာ Adidas ကျီ!
Functional သားအိမ် cyst
လက်သည်း - ဖက်ရှင်စိတ်ကူးများနွေရာသီရာသီ 2016
အကောင်းဆုံးကိုချက်ပြုတ်နည်းများအရသာ Home-ထိန်းသိမ်းခြင်း - ဆောင်းတွင်းအဘို့အ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သီးဖျော်ရည်အတွက်ချယ်ရီ
ပန်းသီးနှင့် chokeberry ၏ Compote
သငျသညျအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးခဲ့သည့်အကြောင်းကိုသေခြင်းအကြောင်း 20 တုန်လှုပ်ဖွယ်အချက်အလက်များ,
မျက်နှာကိုအဘို့အ Linseed ရေနံ
Margot ရော်ဘီအလက်ဇန်းဒါး Skarsgard ဒဏ်ရာရသူနှငျ့ရငျးနှီးမြင်ကွင်းတစ်ခုစဉ်အတွင်း